အနန္တငါးဖြာ ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
( တို့ဗမာအနန္တာ အနန္တငါးပါးကို.. ကိုယ်ရေတင် ရိုသေလျှင် ဆင်းရဲခြင်းဝေးကွာ )၂.. ( ဘုရားနဲ့တရားတော် ရဟန်းသံဃာ.. မိဘနှစ်ပါးနဲ့ သင်ကြားတဲ့ဆရာ )၂… ( ယုံကြည်စွာ ပြုစုကြပါ ပုပုရွရွ သတိပေးတဲ့စာ )၂ (နေ့တိုင်းမှာ ညတိုင်းမှာ လက်ဆယ်ဖြာ ဦးထပ်တင်မိုးကာ )၂ ရှိခိုးလို့ ၀န္ဒနာ ပူဇော်ကန်တော့ပါ အမျိုးသားရွှေဗမာ…
( ဂါဝရတရား ထာဝရထား မမှားဖို့ရာ စွဲမြဲကြ မလွဲအောင်သာ မျိုးရိုးဇာတိပါ )၂ .. မသွေတမ်း မှတ်သားစရာ… ရွှေကျမ်းမြတ်ဘုရားအမှာ မှန်ပေတာ အနန္တငါးဖြာမှာ လင်းထင်စွာ ရှိရင်းဒေသနာ…
(ရဟန်းတော်တွေ့ရင် ၀တ်ချကာ ဖိနပ်ကိုချွတ်ပါ လူ့ရှေ့မှာ… စိတ်မကြွားစေ အရိပ်များလေ ခြေနင်းမိရှောင်ကွင်းပါ )၂.. ( ကိုယ်ကျင့်တရားဖြင့် လူတိုင်းရှိတာ အမှန်ပါ.. ဘိုစိတ်ပေါက်ကာ နဂိုစိတ်ပျောက်ကာ စဥ်းစားကြဖို့ အမျိုးသားတကာ ) ၂ ( အမေအဖေနှစ်ဖြာ ဆုံးမရင် ပယ်တာ တို့ရော သူသူငါငါ မှားယွင်းချက်တွေ ပြင်ကြစေရာ )၂ စေတနာထားတဲ့တင်လွှာ .. သတိရဖို့ မျိုးနွယ်စစ်တွေပါ….
ဂါဝရတရား …. ၀ ….. ၀ …….. ဒေသနာ….။